Ujeedka Faransiiska uu ka damacsan yahay Kenya iyo saameynta Turkey & Somalia | Caasimada Online
Home Maqaalo Ujeedka Faransiiska uu ka damacsan yahay Kenya iyo saameynta Turkey & Somalia
Ujeedka Faransiiska uu ka damacsan yahay Kenya iyo saameynta Turkey & Somalia
">By Cabdulqaadir Cariif Qaasim
Arbacadii September 30, 2020 ayaa Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kula kulmay dhiggiisa Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris. Safarka oo ku soo beegmay xilli Covid-19 uu dunida aafeyey ayaa ahaa mid ujeeddo badan leh oo ay Faransiiska iyo Kenya ku kala saxiixdeen heshiisyo maalgelin gaarayay 1.6 bilyan yuro si loo xoojiyo xiriirka labada dal.
Bishii March 2019kii ayaa Macron socdaal ku kala bixiyay dalalka Jabuuti, Itoobbiya iyo Kenya taas oo warbaahinta ku tilmaamtay mid looga gol lahaa ka hortagga saameynta Shiinaha ee gobolka, balse u muuqdo in loogu gogolxaarayay saameynta Faransiisku ee Bariga Afrika.
Socdaalkaas Macron waxuu Uhuru kula saxiixday heshiisyo gaaraya ilaa 2 bilyan yuro ($2.27 bilyan) oo ay ka mid ahayd 200 malyan yuro oo uu Faransiisku ku ilaalinayo xeebta iyo badda Kenya xilli muran ka taagan yahay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, shirkadiisa Total-na ay ka mid tahay shirkadaha shidaalka sida sharci darrada ah uga baarayo aaga badda Soomaaliyeed.
Si lama filaan ah, shirkii Caalamiga ee Dhaqaalaha Buluugga ah (Sustainable Blue Economy) ee lagu qabtay Nairobi, ayaa dowladda Faransiiska kula saxiixtay Kenya Iskaashi Amni oo ay qayb ka ahaayeen dalalka Comoros, Djibouti, Madagascar, Mauritius iyo Seychelles, balse shaki geliyay Soomaaliya.
Walow ay ka jiraan dhinaca Badweynta Hindiya fursado iskaashi oo aan la inkiri karin, haddana Faransiisku waxuu rabaa inuu muujiyo cududiisa badeed taas oo leh cabsideeda. Iskaashiga amniga ee uu la yeeshay dalalka gobolka waa dariiq uu ku xukumayo marinnada badda ee u dhexeeya Gacanka Beershiya (Persian Gulf), Badda Dhexe (Mediterranean Sea) ilaa Badweynta Hindiya.
Xiriirka ganacsi ee Faranssiska iyo Kenya waa mid sii kordhaya sannad waliba. Faransa waa waddanka 14aad oo Kenya ay badeeca kasoo iibsato oo u badan makiinado culus, dawo iyo qalabka qurxinta, iyo beeraha, iwm. Maalgashiga Faransiiska wuxuu ahaa laba sano ka hor (2017) kudhawaad 500 malyan Yuro, halka mugga ganacsiga isla sannadkaas 171 milyan Yuro (Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransa, Dossiers Pays, Kenya).
Dhinaca kale, Faransiisku waxuu si cad u doonayaa inuu Shiinaha kula tartamo qayb ka mid ah maalgashiga dhismaha kaabayaasha sida ka muuqata heshiisyada dhawan ay Kenya ku kala saxiixdeen “Elysee Palace” oo ah madaxtooyada rasmiga ah ee Faransiika.
Paris waxay malgashiga kordhaya ee Beijing iyo Ankara u aragtaa inay caqabad weyn ku yihiin saameynteeda qaaradda, gaar ahaan “Franc Zone,” oo aan hore lagula tartami jirin. Shirkadahooda waxay raadinayaan sidii ay u kordhin lahaayeen iskaashiga Ankara kaddib markii ay arkeen in xiriirka Turkiga ee qaaradda Afrika uu sii kordhayo.
Sanadkii 2019ka ganacsiga Turkiga ee Afrika waxuu gaaray 26 bilyan oo doolar, halka ganacsiga Shiinaha ee 2018kii lagu qiyaasay 150 bilyan yuro.
Si kastaba ha ahaate, Faransiisku waxuu wajahayaa tartan sii kordhaya mana u sahlana sidii uu dalalka Afrika ugu qancin lahaa inay kala shaqeyaan maalgashi si uu u ilaalsado doorkiisa xilli Mareykanku, Shiinaha, Turkiga iyo kuwo kale ay u soo bandhigayaan kor u qaadidda xasilloonida iyo maalgashiga barwaaqeynta qaaradda, gaar ahaan Bariga Afrika.